Fomba, alalana ary alalana | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 16, 2009 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Namaky magazina Web Design (magazine mamirapiratra!) Aho ary tao amin'ilay faritra nahenoana dia:
Orinasa mpandrindra programa mamoaka kaody. Orinasa mpitantana mamokatra fivoriana. Tweet avy amin'i Greg Knauss, Programmer.
Nahatonga ahy hieritreritra momba ny fanombohana izany. Rehefa mivoatra ny fanombohana dia heveriko fa misy karazana mpiasa maromaro tonga eny an-tsambo:
Tonga aloha ny mpanao. Vitan'izy ireo ny raharaha, na inona na inona.
Avy eo tonga ny mpitondra. Manampy amin'ny fitarihana ny mpanao izy ireo ary manampy amin'ny fanosehana ny orinasa mankany amin'ny làlana tsara.
Avy eo tonga ny mpitantana. Izy ireo dia mampiditra ny fizotrany, ny alalana ary ny fanomezan-dàlana.
Dingana 3 no dingana manakorontana. Ny tanjon'ny fizotrany, ny alalana ary ny fanomezan-dàlana dia ny miantoka ny kalitao sy ny filaminana. Na izany aza, rehefa manelingelina ny famoronana sy ny fandraisana andraikitry ny orinasa iray mitombo dia halevina izany. Nahita an'io isaky ny fanombohana niasa aho.
Manome boky fandokoana sy crayons an mpanakanto ary ny milaza azy ireo hijanona eo amin'ny laharana dia fomba azo antoka antoka hahazoana antoka fa tsy hahazo sombin-kanto sarobidy ianao.
Tags: kaonty twitter nampiroboroboFanapahan-kevitravideo conference
Fampisehoana: Fomba mora hamonoana fivoriana
Mar 16, 2009 ao amin'ny 3: PM PM
Mar 16, 2009 ao amin'ny 7: PM PM